कलाकार ओलेग सोलोभीभ
म एक कलाकार हुँ. शब्दहरू, वर्ष को लागि म बारेमा भन्न सक्छौं पछि गर्व गर्ने. ठूलो Eugène Delacroix एक पटक भन्नुभयो: "चित्रकारी – neboltlivoe कला, र यो आफ्नो धेरै मर्यादा छ ". त्यो चित्र मेरो बारेमा थप भन्नेछन्, कुनै पनि कथाहरू भन्दा. तपाईंको कल फेला - एकदमै गाह्रो छ. तर काम साँच्चै छैन केवल निर्माता प्रसन्न गर्दा, तर धेरै अरूलाई - यो अविश्वसनीय समर्थन र बल दिन्छ गर्नुपर्छ.
मेरो काम मेरो आँखा र मेरो भावना मार्फत संसारको देखाउन इच्छा भरिएका छन्. सबैले कलाकार ओलेग Solovyov को दृष्टि सहमत हुनेछ, तर विश्वका मानिसहरू धेरै, र Kandinsky द्वारा जो काम, पिकासो वा Chagall आदिम जस्तो. र वास्तवमा बावजुद, हामी एक उच्च प्राविधिक संसारमा बाँच्ने, क्यानभास र कागजमा चित्रकला को कला यसको आकर्षण गुमाएको छैन.
थप र मान्छे कलाकार देखि एक चित्रकला आदेश निर्णय. तर, चित्रकला छैन धेरै समझ, शैलीहरू र सामाग्री को एक विशाल विविधता हराएको. प्रत्येक कलाकार काम आफ्नै विधि छ, रंग खोज को आफ्नो बाटो, फारम र शैली. मेरो काम - समकालीन कला. र हुनत चित्रकला - प्राचीन संसारमा कला, म थप पप कला रुचि, अग्र-दल.
को अग्र-दल को संस्थापक Wassily Kandinsky द्वारा मानिन्छ. के उल्लेखनीय छ कला मा प्रवृत्ति छ?
नयाँ प्रकारका लागि खोज, receptions, शैलीहरू, चित्रकला को दुनिया मा समर्थन नवीनता.
इन्कार क्लासिक र सार्वभौमिक पहिचान, विद्रोह. अग्र-दल कला पूर्ण क्रान्तिको को आत्माको permeated छ.
वर्ण तस्वीर - विवादास्पद, अस्पष्ट, जटिल.
एक तस्वीर गर्न प्रतिक्रिया एकदम ध्रुवीय हुन सक्छ, तर निश्चित indifferent जो कोहीले छोड्न हुनेछ. कामहरू थुप्रै संसारमा कला को खजाना समावेश. को अग्र-दल को सबै भन्दा प्रसिद्ध मालिकको - साल्भाडोर Dali, मार्क Chagall, पिट Mondrian, पाब्लो पिकासो र अन्य.
पप कला अपेक्षाकृत हाल छ, बीचमा 20 सताब्दी. र अग्र-दल को शाखा को रूपमा, यो लोकप्रिय संस्कृति को प्रभाव झल्काउँछ. त्यो पप कला यस्तो स्थिति र गतिज कला रूपमा क्षेत्रमा गति दिए, अमूर्त expressionism, नव-पप कला.
यो शैली कलाकारहरूको चयन गरिएको छ, को unvarnished जीवन वरिपरि देखाउन खोजिरहेका, ironically आधुनिक vulgarity ज्यादै हाँसो गर्छन्, उदासीनता र समाज को अन्य दुष्कर्मलाई. किन म त कला को दुनिया मा यो कठोर असाधारण शैली नजिक छु कि छ.
म धेरै penmanship जडान गर्न प्रयास, त्यसैले उसले आफ्नो शैली सिर्जना, आफ्नै कलात्मक हस्तलेखन. चित्रहरु अक्सर allegories भरिएका छन्, रूपकहरुको, रहस्यमय न्यानोकीत.
त्यो आदेश गर्न सकिन्छ?
आदेश चित्रकारी - एक डरलाग्दो बाटो कुनै पनि भित्री गर्न विशिष्टताको थप्न, जबकि यसको कार्यक्षमता सम्झौता छैन. को पाठ्यक्रम, तपाईं एक समाप्त चित्रकला किन्न सक्नुहुन्छ. बिन्दु, मलाई तपाईको बिचार भन्नुस्, भविष्य क्यानभास को दर्शन, यसको उद्देश्य.
यदि ग्राहक एक साथी को लागी अनुकूलन उपहार खोज्दै छ, नातेदार र समाप्त काम बीच एक उपयुक्त विकल्प फेला - सम्पर्क. कुनै पनि जटिलताको अर्डर एक किफायती मूल्यमा समयमा पूरा हुनेछ.
कुन पेन्टि order्स म अर्डर गर्छु?
उपहारको लागि, उत्तम समाधान भनेको पोर्ट्रेट हो. वा फोटोबाट तस्विर. कलाकारबाट एक चित्रको अर्डर गर्नुहोस् – यो कुनै पनि छुट्टीको लागि अनुपम हो, कुनै पनि कारणका लागि. एक तस्वीर बाट क्यानभासमा एक सक्षम कार्यान्वयन क्यानभास उपहार को रूपमा प्राप्त गर्न को लागी रमाईलो हुनेछ, केटी जस्तै, र वर्ष मा पुरुष सेक्स को व्यक्ति. तस्विरबाट अर्डर गर्नका लागि चित्रहरू व्यवसायका लागि उत्तम विकल्प हुन्छन्, जो धेरै व्यस्त छन्, र कलाकारको अगाडि पोज गर्न तिनीहरूसँग समयको अभाव छ. निश्चिन्त आश्वासन - म सबै सहमत भएका विवरणहरूलाई ध्यानमा राख्नेछु: कुञ्जी, प्रविधी, शैली.
ग्राफिक्स कुनै पनि कलाकारको कामको आधार हुन्. तपाइँ कार्डबोर्ड वा वाटर कलर कागजमा छनौट गरिएको शीर्षकमा रेखाचित्र अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ. म कम्प्युटर ग्राफिक्सको साथ पनि काम गर्दछु, त्यसैले ग्राहकहरु मा भरोसा गर्न सक्छन्: कम्पनी लोगो विकास, टाटु स्केच, घरपालुवा जनावर रेखाचित्र र अधिक.
अर्डर गर्न तेल चित्रहरु एक विलासी भित्री विवरण हो. वास्तविकता, जुन म तपाईंलाई प्रस्ताव गर्न सक्छु.
सिटीस्केप - अद्वितीय र अपरिहार्य चित्रहरू, ती शहरहरू आफैंले. पछिल्लो शताब्दीमा, तिनीहरू युरोपमा धेरै लोकप्रिय थिए।, र अब तिनीहरू हाम्रो देशमा एक प्रवृत्ति हो. त्यस्ता छविहरू बहुमुखी छन्: तिनीहरू कुनै पनि कोठामा उपयुक्त देखिन्छन्. केवल कुरा, शैलीमा के ध्यान दिने - शैली.
एब्स्ट्र्याक्ट पेंटिंग ऊर्जा र भावुकताले भरिएको छ. उनी आफ्ना ग्राहकहरुलाई हर्षित पार्छिन् र सधैं ध्यान आकर्षित गर्छिन्।. यो शैली मा चित्रहरु अत्यन्तै लोकप्रिय छन्. अमूर्त कला वा पप कला शैली मा क्यानभास मा तेल चित्रकला कुनै पनि कोठा ठूलो उच्चारण थप्नेछ.
मेरो काम को peculiarity
पात आकार - कुनै पनि आकार को ग्राहकको रुचि.
शैली - रूपमा ग्राहक रोजेका.
भौतिक - क्यानभास, गत्ता, कागज, Kraft.
उपकरण: तेल, एक्रिलिक, मसी, gouache, ग्राफिक्स, मिश्रित मिडिया, जेल पेन, आदि.
किन तिमी परिणामहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?
उच्च गुणस्तर तस्वीर.
कार्यान्वयन को गति.
तस्विर टाढैबाट आदेश गर्न सकिन्छ.
मा अनुरोध, म इलेक्ट्रोनिक फारम मा छवि अनुवाद गर्न सक्छन्.
सुविधाजनक भुक्तानी विधिहरू.
भित्री मा चित्रहरु
भित्री सजावटको लागि कुनै पेन्टिंग छनौट गर्न सजिलो छ, कसरी यसलाई चित्रण गर्ने. विचार गर्न धेरै विवरणहरू छन्।: फर्नीचर, बत्तीहरू, रंग दायरा, कोठाको आकार र यसको उद्देश्य. रसियामा भित्री भागका लागि चित्रहरू खरीद गर्न निश्चित ज्ञान र शैलीको भावना चाहिन्छ. सहि क्यान्भास मित्र र परिवार खुशी हुनेछ, एक व्यक्ति को स्वाद को बारे मा धेरै बताउँछ.
मेरो तस्बीर हरु, बिभिन्न तरिकाहरू र रेखाचित्र प्रविधि द्वारा प्रदर्शन, सुन्दरतापूर्वक मनमोहक र भव्य देखिनेछ र मालिकलाई पक्कै खुशी हुनेछ, र दर्शकहरू. भित्री लागि आधुनिक चित्रहरू किन्नु भनेको कलाकारको एक टुक्रा किन्नु हो, र प्रत्येक तस्वीर, एक पेशेवर द्वारा लेखिएको, तुरुन्तै राजधानी हुन्छ.
मेरो प्रत्येक कार्य व्यावसायिकता को सार हो, तपाइँको रोजाई र अनन्य को आधार, जुन तपाईंसँग मात्र हुनेछ.
काम को उदाहरण मुख्य पृष्ठमा पोर्टफोलियो मा देख्न सकिन्छ
कलाकार देखि एक चित्रकला आदेश लागत के छ
तस्विर को आकार को लागत
लघु बाट 5000 RUR
छोटा बाट 10000 RUR
केन्द्रीय बाट 15000 RUR
ठूलो बाट 20000 RUR
समग्र व्यक्तिगत तय
यो औसत मूल्य देखाउँछ, फ्रेम मा अवकास बिना
मूल्य फरक हुन सक्छ, को माल र यसको कार्यान्वयन को प्रविधि आधारमा.
अन्तिम मूल्य समस्या आधारमा गठन गरिएको छ, कार्यान्वयन र समय को कठिनाई.
1996-2000 – उहाँले चेल्याबिन्स्क कला कलेज स्नातक, डिजाइन को संकाय
2000-2007 – उहाँले कला र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा स्नातक. siskin (उड), कुर्सी संचार डिजाइन